राम्रो थीसिस कसरी लेख्ने - Victor Mochere
by जुडी फ्रान्को
स्नातक कुनाको वरिपरि छ र तपाईंले यसको लागि तयारी गर्न आवश्यक छ। उत्सवको लागि मात्र होइन तर तपाईंको अन्तिम पेपर डेलिभर गर्नको लागि। तपाईको थीसिस लेख्नु भनेको समय लिने प्रक्रिया हो। एउटा थीसिस एउटा जटिल कागज हो जुन तपाईंले लेख्न र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ र त्यसपछि मूल्याङ्कन समितिमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। अन्तिम पेपर लेख्नु भनेको कलेजमा शिक्षा प्राप्त गर्नुको एक हिस्सा हो र प्रत्येक विद्यार्थीले यसलाई पार गर्नेछ। यद्यपि यो जटिल देखिन्छ, केहि सुझावहरू र चालहरू र केही दिशानिर्देशहरूको साथ, तपाइँ यसलाई नेल गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्नातक प्रक्रियाको भाग हो, त्यसैले तपाईंले यो चरण छोड्न सक्नुहुन्न। त्यसोभए, थीसिस कसरी लेख्ने? पछ्याउन केही सुझाव र चालहरू के हुन्? तपाईको थीसिसमा हुनु पर्ने केहि चीजहरू छन्?
1. एउटा विषय खोज्नुहोस् र आफ्नो विचारहरू संरचना गर्नुहोस्
3. लेख्न सुरु गर्नुहोस्
४. पहिलो बनाम फाइनल
5. आवश्यकता र अपेक्षाहरू
थीसिस लेखन कहिलेकाहीं बोझ जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी हुनुको अभिन्न अंग हो। त्यसोभए, तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको विषय फेला पार्नु र तपाईको विचारहरू संरचना गर्नु हो। सबैभन्दा सजिलो तरीका भनेको तपाईलाई मनपर्ने वा थप जान्न चाहनु भएको विषय छान्नु हो। यसले तपाइँको थीसिसमा काम गर्न थप रमाइलो बनाउनेछ र तपाइँ यसलाई पूरा गर्न थप उत्प्रेरित हुनुहुनेछ।
र अर्को भाग तपाइँको विचारहरु को संरचना को बारे मा छ। तपाईं किताब पढ्न वा आफ्नो अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। र यो धेरै जानकारी र विचारहरु संग आउनेछ। त्यसोभए, यो आवश्यक छ कि तपाईका विचारहरू संरचना गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थित गर्नुहोस् ताकि तपाईंले स्पष्ट र आकर्षक थीसिस प्रदान गर्नुहुनेछ। यो क्षण हो जब तपाइँ तपाइँले गर्न आवश्यक कार्यहरु द्वारा अभिभूत महसुस गर्न सम्भव छ।
अनुसन्धानको चरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब तपाइँ एक थेसिसको रूपमा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक पेपर लेख्नुहुन्छ। तपाईंले छनौट गर्नुभएको विषय जे भए पनि, तपाईंले तथ्य र तथ्याङ्कहरूको साथ आफ्नो तर्क ब्याकअप गर्न आवश्यक छ। तपाईंले केही परिकल्पना बारे सोच्नु पर्छ र त्यसपछि एक अध्ययन सञ्चालन गर्नुहोस् वा तपाईंको दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्ने जानकारी फेला पार्नुहोस्। र यसमा ठूलो अनुसन्धान समावेश छ। तपाइँ एक विशेष विषयमा तपाइँको पाठ्यक्रम पढ्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ वा पुस्तकालयमा पाठ्यक्रम जाँच गर्नुहोस्। तपाइँ त्यो विद्यालय पाठमा फर्कन सक्नुहुन्छ जसले तपाइँलाई तपाइँको छनोट गरिएको विषयको साथ प्रेममा पारेको छ।
ठीक छ, सायद प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण लेख्न सुरु गर्नु हो। यस क्षणको लागि तयार गर्नको लागि तपाईसँग थप चीजहरू छन् जस्तो लागे तापनि, जति सक्दो चाँडो सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ। एक थीसिस 40 र 80 पृष्ठहरू बीच हुनुपर्छ, तर अवश्य पनि, यो विश्वविद्यालयको आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ। तर यी पृष्ठहरू लेख्न केही समय लाग्नेछ, त्यसैले जति सक्दो चाँडो सुरु गर्न सिफारिस गरिन्छ।
यसले तपाइँलाई तपाइँका विचारहरू व्यवस्थित गर्न र सन्देशलाई सही रूपमा पठाउन सुनिश्चित गर्न थप समय दिनेछ। तपाईले रोजेको विषयको बारेमा तपाईको दिमागमा जाने कुरा लेख्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले अध्यायहरूमा जानकारी व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ र बुलेट बिन्दुहरूका साथ आफ्ना विचारहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि तरिका राम्रो छ, यो लेख्न सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाइँको पहिलो मस्यौदा हुनेछ। तपाईंले पक्कै पनि केही सम्पादनहरू ल्याउनुहुनेछ।
तपाईंको पहिलो र अन्तिम मस्यौदा बीचको भिन्नता बनाउनु आवश्यक छ। धेरै विद्यार्थीहरूले लेख्न सुरु गर्नबाट जोगिन्छन् किनभने तिनीहरू शक्तिशाली थीसिस सिर्जना गर्न चाहन्छन् र उनीहरूलाई थप अनुसन्धान वा समय चाहिन्छ। तर ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईको पहिलो मस्यौदा अन्तिम हुनेछैन। निश्चित रूपमा तपाईंले तथ्याङ्क र तथ्यहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाईंले पछि परिचय गराउनुहुनेछ। निश्चित रूपमा, जब तपाइँ मस्यौदा पुन: पढ्नुहुन्छ, तपाइँसँग नयाँ परिप्रेक्ष्य हुनेछ र वाक्यहरू दोहोर्याउनुहोस्, शब्दहरू थप्नुहोस्, र यस्तै। त्यसोभए, तपाईंले लेख्न सुरु नगरेसम्म पर्खने जालमा नपर्नुहोस्। तपाइँ यसलाई पछि सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ; सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सम्पादन गर्न केहि छ।
ठिक छ, तपाईलाई सचेत हुन आवश्यक छ र तपाईले पछ्याउन आवश्यक पर्ने आवश्यकताहरू र परीक्षकको अपेक्षाहरू जान्न आवश्यक छ। यद्यपि, तिनीहरूमध्ये केही तिनीहरू सबैका लागि सामान्य छन्। तिनीहरू स्पष्ट, चिल्लो र तार्किक थीसिस पढ्न चाहन्छन्। तिनीहरू हेर्न चाहन्छन् कि तपाइँका तर्कहरू तथ्याङ्क, तथ्याङ्कहरू, चार्टहरू, र यस्तै अन्यसँग जगेडा छन्।
तिनीहरू हेर्न चाहन्छन् कि तपाईंले विस्तृत अनुसन्धान गर्नुभयो, तपाईंले विषय र सिद्धान्त बुझ्नुभयो। तिनीहरू हेर्न चाहन्छन् कि तपाईं आफ्नो काममा मौलिक र रचनात्मक हुनुहुन्छ र यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा थप मूल्य थप्छ। तपाइँ तपाइँको थीसिस कसरी निर्माण गर्नुहुन्छ यो तपाइँ मा निर्भर गर्दछ। जे होस्, तपाईले एउटा कथा पनि सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ, तर नायक पढ्ने भन्दा फरक छ जुन हामी धेरै अभ्यस्त छौं।
एक थेसिस सही रूपमा लेख्नु एक बोझ जस्तै लाग्न सक्छ। विशेष गरी जब तपाइँसँग तपाइँलाई सुरु गर्न मद्दत गर्न स्पष्ट दिशानिर्देशहरू छैनन्। त्यसोभए, एक शक्तिशाली र स्पष्ट थीसिस प्रदान गर्न, यहाँ केहि सुझावहरू र चालहरू छन् जुन सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समर्थन गर्दछ। एउटा विषय फेला पार्नुहोस्, आफ्नो विचारहरू संरचना गर्नुहोस्, र आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहोस्। लेख्न सुरु गर्नुहोस् र दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईंको पहिलो मस्यौदा अन्तिम होइन। त्यसोभए, तपाइँसँग जानकारी थप्न वा वाक्यहरू पुन: वाक्यांश गर्नको लागि प्रशस्त समय हुनेछ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईलाई पालना गर्नु पर्ने आवश्यकताहरू बारे सचेत हुनुहुन्छ, जस्तै ढाँचाहरू। मौलिक, रचनात्मक, र राम्रोसँग समर्थित थीसिस पढ्ने उनीहरूको अपेक्षाहरू पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नुहोस्।